“Sheekh Shaakir iyo kooxdiisa ee Dhuusamareeb joogta, waxaan leeyahay dadka caburiska ka daaya” (DHAGEYSO) - Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
“Sheekh Shaakir iyo kooxdiisa ee Dhuusamareeb joogta, waxaan leeyahay dadka caburiska ka daaya” (DHAGEYSO)
Wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya C/raxmaan Maxamed Xuseen “Odowaa” oo maalmihii ugu dambeeysay ku sugnaa deegaanadda Galmudug ayaa baaq u diray maamulka gobolada dhexe ee Ahlusuna Waljameeca.
Wasiir Odowaa oo hadal ka jeediyay shir ka dhacay magaalada Cadaado ee xarunta KMG ee maamulka Galmudug ayaa maamulka Ahlusunna ee gobolada dhexe ugu digay inay is hor-istaag ku sameeyaan odayaasha iyo waxgaradka ka qeyb-galaya soo xulista xubnaha gobolada dhexe u matalaya baarlamaanka cusub.
Sidoo kale wuxuu wasiir Odowaa tilmaamay in Sheekh Shaakir iyo kooxdiisa ee joogta magaalada Dhuuso-Mareeb ay cadaadis ku haayaan odayaasha iyo waxgaradka jecel inay ka qeyb-galaan soo xulista xubnaha gobolada dhexe u matalaya baarlamaanka cusub isagoona ku goodiyay inaysan marnaba ogolaan doonin arrinkaas.
“Sheekh Shaakir iyo kooxdiisa ee Dhuusamareeb joogta, waxaan leeyahay dadka caburiska ka daaya, kaalay oo imaada Galmudug, iyadaa idin deeqdee, Galmudug ayaan wada-leenahay ee kaalaya aan wada-dhisano” Sidaas waxaa yiri wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya C/raxmaan Odowaa.
Dhinaca kale, wasiir Odowaa ayaa ugu dambeyntii sheegay in Galmudug hormarkeeda uu ku xiran yahay in la muujiyo isku duubnaan islamarkaana caburinta laga dhaafo odayaasha iyo waxgaradka jecel inay ka shaqeeyaan soo xulista xubnaha gobolada dhexe, kuwaas oo u matali doonno baarlamaanka cusub ee Soomaaliya.